अमेरिकाको एट्लान्टामा दर्शनशास्त्री डा. योगीको अध्यात्मिक कार्यक्रम सम्पन्न - Enepalese.com
अमेरिकाको एट्लान्टामा दर्शनशास्त्री डा. योगीको अध्यात्मिक कार्यक्रम सम्पन्न
इनेप्लिज २०७६ असार २५ गते १:३० मा प्रकाशित
अमेरिकाको एट्लान्टा शहरमा दर्शनशास्त्री डा. चिन्तामणी योगीको अध्यात्मिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाली सांस्कृतिक केन्द्र एट्लान्टाको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा डा. योगीले पुर्विय दर्शनको महिमा र जीवनपयोगी प्रवचन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
नेपाली समाज जर्जियाका अध्यक्ष कुमार केसीको सभापतित्वमा आयोजित उक्त कार्यक्रम नेपाली सांस्कृतिक केन्द्रको समाकक्षमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा. योगीले पानसमा द्धीप प्रज्वलन गरेर आरम्भ भएको सो कार्यक्रममा एट्लान्टा शहरका लागि नेपाली पर्यटन दूत राजा घलेले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै घलेले प्रवासमा रहेर पनि नेपाली कला, भाषा र संस्कृतिको सम्बर्धन र संरक्षणार्थ विविध् कार्यक्रमहरुको आयोजना हुनु नेपाल र नेपालीको लागि गर्विलो सत्य रहेको बताउनु भयो । एटलान्टा स्थित नेपालीहरुको आफ्नै सामुदायिक भवन ” नेपाली सांस्कृतिक केन्द्र”मा यो कार्यक्रम पहिलो भएकोले एतिहासिक र बिशेष हुनेछ ” घलेले भन्नुभयो !
युनिभर्सिटी अफ जर्जियाको निमण्त्रणामा हाल अमेरिकाको जर्जिया भ्रमणमा रहनु भएका डा. योगीले उक्त कार्यक्रममा पुर्वीय जीवन दर्शन र अध्यात्मको बारेमा विविध् जानकारी गराउनु भयो । “बसुधैव कुटुम्बकम” भन्ने सोँचलाई आफ्नो जीवनको मूल मन्त्र बनाई संसारलाई “जीवनको कला” सिकाउँदै आउनु भएका योगी हिन्दु विद्यापीठ नेपाल र शान्ति सेवा आश्रम लगायतका दर्जनौं संस्थाहरुसँग आवद्ध हुनुहुन्छु ।
कार्यक्रममा नेपाली सांस्कृतिक केन्द्रका अध्यक्ष डा. प्रल्हाद पन्तले कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो । नेपाली र नेपाली भाषी भुटानीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा आयोजक संस्थाको तर्फबाट डा. योगीलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । कार्यक्रमको उद्घोषक प्रशान आलुंग राईले गर्नुभएको थियो ।
डा चिन्तामणि योगी संग जर्जियाको अत्लान्तामा “नेपाली सांस्कृतिक केन्द्र” को “नेपाली सामुदायिक भवन” मा “आध्यात्मिक प्रवचन” कार्यक्रम